I hereby warn Myanmar Government NOT to arrest any Muslim Activists as they are clearly the defenders only | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Chinese Dragon riding the Myanmar Lion
Arrested opposition would become instant heroes, if died would become martyrs »
I hereby warn Myanmar Government NOT to arrest any Muslim Activists as they are clearly the defenders only
My FRIENDS wrote>>>
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကလည်း online instigators တွေကို အရေးယူဖို့ထုတ်ပြောလာတော့
စီအိုင်အေလို ထောက်လှမ်းရေးတွေများ list လုပ်ပြီး အကြောင်းကြားသလား၊
စီမံချက်ပြီးလို့ ခဏနားတာလား။ မျိုးဆက်၊ James Mint၊ ရှင်မင်းယာတို့က ဦးဆောင် anti-muslim အုပ်စုတွေ။
MY NOTE: There may be “SHOW” arrest of Activists by Bama Buddhist Nationalist Military Government….after US Ambassador’s waning to take action.
I hereby warn Myanmar Government NOT to arrest any Muslim Activists as they are clearly the defenders only. Your Military Affiliated Cyber-troopers, U Wira Thu, EMG and Myanmar Media are CLEARLY the culprits and Instigators.
ကျွန်တော့်အကောင့် ဒီည ၁၁ ကျော်ရင် ဒီအက်တီဗိတ်တော့မယ်…… စိတ်တော်တော် ညစ်နေတယ်ဗျာ…. အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်ဟာကိုယ် စာပဲ ဖတ်နေတော့မယ်…… ဝယ်ထားပီး ပစ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ တအားများနေတယ်……
ကျွန်တော်စာတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေထဲက စိတ်ဝင်စားတာတွေ ကူးထားနိုင်ပါတယ်……. အဲ့ဒါတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပီး ရေးလာတဲ့အပေါ်တွေမှာ ကျွန်တော် တုံ့ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးလည်း မရှိဘူး…. လောလောဆယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေဦးမယ်…… တစ်ချို့ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဂျီတော့ကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်……. အမြဲတော့ ပြန်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ…… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ……
This entry was posted on May 10, 2013 at 4:22 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.